» ओलीको खड्ग प्रहारले तरंगित राजनीति : फाईदा कसलाई ?
ओलीको खड्ग प्रहारले तरंगित राजनीति : फाईदा कसलाई ?
२९ फाल्गुन २०७७, शनिबार १८:४३ प्रकाशित
राजनीतिक तरंग ल्याउने मामिलामा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मुकाबिला गर्न सक्नें सायदै होलान । माओबादी–एमाले एकतादेखि फागुन २८ को घट्नाक्रमलाई फर्केर हेर्दा प्रष्ट चित्र देखिन्छ । दुबै पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई समेत सरप्राईज दिनेगरि भएको पार्टी एकता होस ।
वा पुष ५ को प्रतिनिधिसभा बिघटन संवन्धि कदम । यि सम्पूर्ण घट्नाक्रममा ओलीद्वारा सिर्जित तरंग असामान्य छन । ओलीका अगाडि राजनीतिक पंडित जो व्याख्या बिश्लेषण गर्छन । उनिहरु समेत असफल देखिन्छन ।
ओलीको हरेक कदम पश्चात आम जनताले अब के होला ? यहि प्रश्न बारम्बार गर्नुपर्ने बाध्यता पनि स्वाभाविक रुपमा आइरहेको छ । ओलीको हरेक कदम कल्पना भन्दा बाहिरको कुरो भन्नेंमा कसैको दुई मत संभवत नहोला ।
खड्ग प्रहारको श्रृंखला :
– गुठी बिधेयक
– दल फुटाउन मिल्ने अध्यादेश
– संवैधानिक परिषद संबन्धी अध्यादेश
– प्रतिनिधिसभा बिघटन
– अध्यक्ष र महासचिब बाहेक एमालेका सम्पूर्ण पदाधिकारी खारेज
कुरो शुरु गरौं गुठी बिधेयकबाट । यो प्रकरणमा कसको हार भयो ? लेखिरहनु नपर्ला । तर पनि पुर्नताजगीको लागि लेख्दैछु । यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीको हार भएको थियो । बिधेयकको बिरुद्धमा काठमाण्डौका रैथाने नेवार समुदाय जब सडकमा उत्रियो , सरकार पछाडि हट्यो । जसले बिधेयक ल्यायो उसले नै फिर्ता लिनुप¥यो ।
अर्थातः सरकारले गल्ती स्विकार ग¥यो अनि हार पनि । जुन बिधेयकले ओलीको सत्ता नै हल्लाईदिएको थियो । जति जोडबल गरेपनि अन्ततः गुठीयारहरुले ओलीलाई घुँडा टेकाइछाडेका थिए ।
दल फुटाउन मिल्ने अध्यादेश
यो प्रकरणमा पनि ओलीलाई असफलता मिलेको थियो । पार्टीमा पनि उक्त अध्यादेशमा सहमति जुटाउन उनि असफल रहे । न त प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई मनाउन सके । न त तात्कालिन राजपा र जसपालाई । तीव्र बिरोधपछि ओली एककदम पछि हट्नै प¥यो ।
पार्टीभित्रैकाले पनि समर्थन नगरेपछि ओली हार स्विकार्न विवश भए । आफ्नै कदम उनलाई प्रत्युदपादक बन्यो । अध्यादेश फिर्तापछि सांसद अपहरणको जुन घट्नाक्रम भयो त्यो त हरेकको स्मृतीमा ताजै छ ।
संवैधानिक परिषद संबन्धी अध्यादेश
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुनेंगरी आएको उक्त अध्यादेश संविधानसँग पनि बाझिएको छ । संविधानको धारा २ सय ८४ को संवैधानिक परिषदको गठन संवन्धी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी कानुन संशोधन गर्ने मनसाय यसमा लुकेको आरोप लागेको छ ।
वर्तमानका प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र जसपाले त यसको डटेरै विरोध गरिरहेका छन । गत २३ गते वसेको बैठकमा सरकारले अध्यादेश टेबुल गरेपछि उनीहरुले चर्को नारावाजी गरेका थिए ।
बिरोध गर्नेमा अव माओबादी केन्द्र र एमालेको माधव नेपाल समूह मिसिएपछि यसमा पनि ओलीलाई हात लाग्यो शून्य हुनेंवाला छ । ओली समर्थकलाई तीतो लागेपनि यो हुनें संभावना ज्यादा से ज्यादा छ ।
सबैभन्दा शक्तिशाली खड्ग प्रहार यसै प्रकरणमा भयो ।ओलीको प्रहार शुरुमा ब्रह्मास्त्र जस्तो देखिए पनि अन्ततः त्यो बिफल भयो । अर्थात सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरिदियो । र भन्यो– ‘प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक छ ।’
सर्वोच्चको फैसलापछि पनि उनको कदमलाई संवैधानिक मान्नेहरुको पनि कमि छैन । तथापि सर्वोच्चले असंवैधानिक भनेपछि त्यसमा बिबाद गरिरहनु परेन । सेतोलाई कालो नै हो भन्नेहरुसंग बहस गर्नु त्यति जायज पनि हुन्न ।
पार्टीभित्रको बिबाद उत्कर्षमा पुगेका बेला करिब एक बर्षअघि नै भनेका थिए– ‘म बस्न मिलेन भनें यो कुर्ची नै भाँच्दिन्छु’ । उनको त्यो अर्थपूर्ण बोली अन्ततः संसद बिघटनका रुपमा प्रकट भएको थियो । यद्दपि सफलता भने मिलेन ।
तर पनि आफैद्वारा बिघटित सोही संसदमा ओली नै पुनः सत्ताको खेलमा व्यस्त छन । त्यो पनि मेन स्ट्राईकरका रुपमा । सहयात्रीहरुले उनलाई पेलेको उपमा दिइसकेका छन । तर उनिहरुले पनि बुझ्नुपर्छ कि कहिलेकाँही पेले पनि खालि पोष्टमा गोल गर्न असफल हुन्छन । सँधै उसैले मात्र गोल हान्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । गोल कसले गर्ला धेरै समय कुर्नुपर्ने देखिन्न ।
एमालेमा अध्यक्ष र महासचिब बाहेक सम्पूर्ण पदाधिकारी खारेज
राजनीति पुनः तरंगित हुनेंगरि फागुन २८ मा एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेको अर्को प्रहार हो यो । अर्को पक्षलाई तत्काल चोट लागेको देखिएपनि त्यसलाई मुतको न्यानो सिवाय हाल केहि भन्नु हतारो हुनेंछ । ओली पक्षधरले हर्षबढाई गर्नु पनि त्यति आवश्यक देखिन्न ।
सर्वोच्चको निर्णय मानेर पुनः एमालेलाई बलियो बनाउने सार्वजनिक उद्घोष गरेकाहरुलाई बिच्क्याउने काम ओली पक्षलाई सहि लागेपनि त्यसको दिर्घकालिन असर पार्टी जिवनमा पर्ने पक्का छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटिमा करिब समान हैसियत राख्नेहरुलाई संसदिय दलमा रहेको अंकगणितकै कारण खेद्नु त्यति उचित देखिन्न । र उनिहरुलाई माओबादीका कार्यकर्ता भन्नु त सर्वथा गलत छ ।
जुन दिन एमाले ब्यूँतियो त्यहि बे्लाबाट नै ओली जस्तै माधब, झलनाथहरु एमालेमा रुपान्तरित भएका हुन । कसैको इच्छाले होईन सर्बोच्चको फैसलाले यि परिघटनाहरु भइरहेका छन । नेपाल–खनाल समूहले समानान्तर कमिटि नै बिस्तार गरिसकेको अवस्था छ । सबैले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा एमाले फुटको संघारमै छ ।
आफ्नै कदम आफैलाई प्रत्यूत्पादक
ओलीको कदम पश्चात बिकसित घट्नााक्रमले माओबादी केन्द्र र एमालेको नेपाल समूहबीच पार्टी एकताको संभावनालाई बल मिलेको छ । अब संसदमा एमालेका सांसदद्वारा पार्टी ह्विप उल्लंघन र फ्लोर क्रसको दृश्य देखिने त पक्का नै भएको छ । ह्विप जारी गर्नुअघि नै ओलीले नेपाल समूहका सांसद निलम्बन वा संसद पुनः बिघटन गर्ने संभावना पनि ज्यूँका त्यूँ छ । किनकि ओलीको डिक्सनेरीमा असंभव भन्नें शव्द नै छैन भन्दा फरक नपर्ला ।
माओबादी केन्द्रले पार्टीको नाम फेर्ने तयारी थाल्नु । अनि एमालेको नेपाल समूहले ओलीकै कारण बिद्रोह गर्नु । ‘स्याल पनि कराउनु, कुखुरो पनि हराउनु ।’ एकैपटक भएको छ । यसलाई संयोग मान्ने÷नमान्ने बहसको अर्को बिषय होला । माओबादी केन्द्रको नाम परिवर्तन गरि पार्टी एकता गर्दा ओली पक्षको टोकसोबाट नेपाल समूह अवश्य बच्नेंछ ।
अर्कोतर्फ कथमकदाचित आँफु इतरहरु एक भए भनें ओलीलाई पुनः फसाद पर्ने त प्रष्ट छ । पार्टी कमिटिमा पछिल्लो पटक ओलीद्वारा भएको खड्ग प्रहार पनि प्रत्युत्पादक हुनें संभावना प्रवल देखिँदैछ । सिलसिलेवार अप्रत्यासित घट्नाक्रमको साक्षी बन्न सबै तयार बसौं । पक्ष–बिपक्ष सबैलाई नतीजा स्विाकार्ने शक्ति प्राप्त होस ।